नेकपा एकतामा जुटेन सहमतिः पेलेर जान खोजे दुर्घटना हुने नेपालको चेतावनी
पासाङ्ग ठकुल्ला शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६, १६:२१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता अझै अन्योलनमा पुगेको छ । लेनिनको जन्मदिनका अवसरमा पार्टी एकता टुंग्याउने नेकपाको तयारी थियो । तर लेनिन जयन्ती सोमबार भएपनि अझै एकताको टुंगो लाग्ने संकेत छैन ।
कार्यकर्ताहरु पार्टी एकतापति प्रदेश र जिल्ला संगै स्थानीय तहसम्मको पार्टी कमिटी बनाउने आशामा बसेका छन् । पार्टी एकताको टुंगो लगाउने विषयमा पार्टी अध्यक्षद्वय सकृय भएपनि आशालाग्दो प्रगती नदेखिएको पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै बताउँदै आएका छन् ।
नेकपाका नेता वेदुराम भुसालले पाटी एकताका बाँकी काम पार्टी सचिवालयले टुंग्याएर मात्र सम्भव नहुने बताए । उनले पार्टी एकता कहिले हुन्छ भन्ने बिषय एकिन भैनसकेको बताए । ‘पार्टी एकताका लागि गृहकार्य गर्न आज नेताहरु बस्ने भनेर सुनेको छु । के भएको छ बुझेको छैन,’ वैशाख ९ गते पार्टी एकताको काम टुंगिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यस विषयमा भविष्य वाणी गर्न सकिदैँन । काम गरे आज पनि हुन सक्छ । रोकियो भने रोकिन सक्छ । कसरी भन्ने त ?’
लेनिन जयन्तीका अवसरमा अर्थात वैशाख ९ मा पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउने गरी नेकपा नेताहरू गृहकार्यमा जुटेको बताइएको थियो । यहीबेला नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ शान्त वातावरणमा आराम खोज्दै बिहिबार सुकुटे पुगे । उनी सुटुक्क सुकुटे पुगेपछि नेकपाको पार्टी एकतामा थप आशंका पैदा गरेको छ ।
यसअघि पनि अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ अमेरिकाबाट फर्केपछि पार्टीको एकताको बाँकी काम टुंग्याइने नेता कार्यकर्ताले बताएका थिए । उनी पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका गएपछि सचिवालय वैठक समेत बस्न सकेको थिएन । उनी अमेरिकाबाट फर्किएपछि बसेको सचिवालय बैठकले नेकपाको सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन गठन भएको एकता कार्यदललाई भंग गर्‍यो ।
यसपछि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड लगानी सम्मेलनको काममा व्यस्त भए । लागनी सम्मेलनमा उनीहरु व्यस्त भएपछि सचिवालयले एकताका बिषयमा छलफल गर्न सकेन । लगानी सम्मेलन पछि बस्ने भनिएको बैठक बारा र पर्सामा गएको हावाहुरीका कारण फेरि प्रभावित भयो । पार्टी र सरकार हावाहुरी घटनाका पीडितहरूलाई राहत र उद्धार कार्यमा व्यस्त रहेको भन्दै बैठक पछाडि धकेलियो ।
अध्यक्ष ओली र ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकताको बाँकी काम छिट्टै टुंगो लाग्ने बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष ओलीले वैशाखमा पार्टी एकताको बिषयमा सरप्राइज दिने बताउँदै आएका छन् । पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्‍याउन केहीसमय अघि चन्द्रागिरिमा नेकपाका शीर्ष नेताबीच गोप्य छलफल भयो । छलफलमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका साथै महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा सहभागी थिए । यो गोप्य छलफलपछि पार्टीको सांगठानिक एकताले पूर्णता पाउन लागेको बताइएको थियो ।
चन्द्रागिरि बैठकमा अनुपस्थित सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरुसँग अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउने बिषयमा बालुवाटार छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । बालुवाटारमा भएको छलफलले नयाँ मापदण्ड बनाएर पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउने सहमति भएको बताइएको थियो ।
जिल्ला तहको एकताका लागि तत्कालीन एमालेभित्र ओली र नेपाल पक्षबीचमा नेतृत्व टकरावका कारण पाटी एकता प्रक्रिया लम्बिएको नेताहरू बताउँछन् । अध्यक्ष ओलीले एकता प्रक्रियाका क्रममा आफूलाई पेलेर जाने रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको आशंकामा नेपाल पक्ष सशंकित बन्दै आएको छ ।
नेता नेपालले भने आफूलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने धम्कीसमेत दिएका छन् । पार्टी एकता समयमा नै नटुंगिँदा नेता कार्यकर्तामा निराशा बढेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । पार्टी एकताको विषयमा शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेको भएपनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए ।
७७ जिल्लामध्ये एकताका क्रममा ४५ पूर्व एमाले र ३२ जिल्लाको अध्यक्ष पूर्व माओवादीले लिने गरी भागबन्डामा सहमति भइसकेको छ । अध्यक्ष पूर्व एमालेले पाएको जिल्लामा सचिव पूर्व माओवादी र पूर्व माओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लाको सचिव पूर्व एमालेले लिने सहमति छ ।
ओली र प्रचण्डले भने अहिले तयार पारिएको विषयलाई अन्तिम रुप दिएर निर्णय गर्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीभित्र पछि आउने समस्याहरुको पछि नै हल गर्दै लैजाने भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । यता नेपाल पक्षले भने यसरी पेलेर जान खोजे पार्टी र्दुघटनामा पर्नेसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिपक्षको सुझावः दलहरुको सहकार्यमा मात्रै समृद्धि कर्मचारीतन्त्र त्यसै पनि असक्षम र ढिलासुस्ती रहेको छ, भने झन् दलहरुबीचमा सहमति कायम हुन सकेन भने सरकारले राखेको समृद्धिको नारा अन्तत: परिणाममा सफल हुन सक्दैन । बुधवार, बैशाख ४, २०७६, १४:२७:००
नेकपा एकतामा जुटेन सहमतिः पेलेर जान खोजे दुर्घटना हुने नेपालको चेतावनी चन्द्रागिरि बैठकमा अनुपस्थित सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरुसँग अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउने बिषयमा बालुवाटार छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । बालुवाटारमा भएको छलफलले नयाँ मापदण्ड बनाएर पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउने सहमति भएको बताइएको थियो । शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६, १६:२१:००
काम भएन भनेर एक वर्ष बाँसुरी खुब बज्यो, अबको बजेट आएपछि के होला ? सोमवार, बैशाख ९, २०७६, १५:१७:००